ရုပ်မြင်သံကြားအတွက် RF စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း MPEG Analyzer @tektronix | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » audio » တစ်ဦး MPEG Analyzer @tektronix နှင့်အတူရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အ RF စောင့်ကြည့်
တစ်ဦး MPEG Analyzer @tektronix နှင့်အတူရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အ RF စောင့်ကြည့်
ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၏သေချာရဲ့အရည်အသွေး (QoS) အကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျစိန်ခေါ်နေပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်တီဗီအစီအစဉ်များကိုကယ်နှုတ်ကွန်ယက်ကိုဗိသုကာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအကွန်ရက်အများစုကပါဝင်သည် ဂြိုဟ်တု ဖြန့်ဖြူးဘို့ - လည်းစားသုံးမိအဖြစ်လူသိများ - စက်ရုံနှင့်အိမ်သို့မကြာခဏ RF တစ်လျှောက်လုံး asi သို့မဟုတ် IP - လည်း Egress အဖြစ်လူသိများ။ အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိစ္စများပြဿနာများ၏အမြစ်အကြောင်းမရှိများသောအားဖြင့်အတော်လေးခက်ခဲသည်သီးခြား, ကျပန်းမှာပေါ်လာသည့်အခါဒီနေ့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံ၏အရည်အသွေးများသောအားဖြင့်အတော်လေးကောင်းလှ၏, ဒါပေမယ့်။ အဆိုပါကိစ္စကို Over-ချုံ့ရွေ့လျားမှုတွေအများကြီးသို့မဟုတ်ပြဿနာကိုအတူမြင်ကွင်းတစ်ခုစဉ်အတွင်းအနည်းငယ်ဓာတ်ပုံများကိုထိုကဲ့သို့သောမိုးသည်းထန်စွာလေတိုက်နှုန်း, မိုးသို့မဟုတ်နှင်းကျကဲ့သို့ကျပန်းရာသီဥတုဖြစ်ရပ်ကနေဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်ဦးအန်ကုဒ်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ထိုပြဿနာမှအစပြုဘယ်မှာမှမရှိပါကိစ္စကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်နေသည်ဟုအလျင်အမြန်ပစ္စည်းကိရိယာများ (သို့မဟုတ်ကွန်ယက်ကိုလင့်ခ်) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့, ကိစ္စကိုဖော်ထုတ် log နိုင်တော့မည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ခွဲထုတ်ဖို့ကစက်ရုံတစ်လျှောက်လုံးလက်လှမ်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုအချက်များရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသည်။ မည်သည့်ကွန်ယက်တွင်စားသုံးမိမှာစမ်းသပ်အမှတ်နိမ့်ဆုံး, အ asi သို့မဟုတ် IP switch သည်နှင့် Egress ရှိသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးသုံး access ကိုအချက်များနှင့်အတူ, အင်ဂျင်နီယာများကြောင့်စားသုံးမိပါက, စက်ရုံ, ဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဖြူး၏ Egress အမှတ်ဖြစ်စေမှာအစပြုလျှင်အဆုံးအဖြတ်, ကိစ္စကိုခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။
နှစျခုနည်းလမ်းများလေ့သံသယကိစ္စများအဘို့အ RF ဂီယာအချက်ပြမှုများကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ တဦးတည်း QoS ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြားအတှေ့အကွုံ (QoE) ၏အရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများ troubleshooting နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးဝင်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီနည်းလမ်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမက်ထရစ်ကို အသုံးပြု. ကိစ္စများကိန်းဂဏန်းဖြင့်။ ဤတွင်ကျွန်တော်စမ်းသပ် QoS က MPEG Analyzer သုံးပြီး RF ဂီယာအချက်ပြမှုများ, စစ်ဆေးတိုင်းတာနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်မည်သို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းထုတ်လွှင့်အချက်ပြမှုနှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိလျှင် QoS တိုင်းတာခြင်းဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ QoS တိုင်းတာရန်တလမ်းတည်းဖြင့်စုစုပေါင်း-bits (ဒီကိုလည်း BER နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်) အားကောင်းသော-bits များ၏အချိုးတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဂီယာ link ကိုစမ်းသပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဒီတော့အထူးစမ်းသပ်ပုံစံများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုထဲကယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားပုံစံများနည်းနည်းသို့မဟုတ်က byte အမှားအတွက်အခါကလွယ်ကူများကိုတွက်ချက်ရန်အောင်ထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, ဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲစမ်းသပ်ခြင်းတိုက်ရိုက်တီဗီအစီအစဉ်များနှင့်အတူပြဿနာကိုစမ်းသပ်ဖို့အနည်းငယ်သာထပ်တလဲလဲ data တွေကိုလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, BER သုံးပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသည် ဂြိုဟ်တု အချက်ပြမှုများ BER redundancy ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုသယ်ဆောင်လို့ပဲ။ စဉ်ဆက်မပြတ် BER တိုင်းတာခြင်းသည်ကောင်းပေမယ့်အမှားအချိုး510E-3 x နှင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမှားများကိုတစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး packet ကိုစလုပ်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါကဗွီဒီယိုနဲ့အသံမှအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုပြောပြရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ အမှားအချိုး (>5x ကို 10E-3) အလုံအလောက်မြင့်မားသည်လျှင်, ထိုအမှားများကိုအသံနှင့်ဗီဒီယို frames များကိုအများအပြားအတွက်လေယာဉ်ဆင်းသက်လိမ့်မည်။ ဒီအများကြီးအမှားများနှင့်အတူကပြဿနာများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သိသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ရက်ကစောင့်ကြည့်ထဲမှာတစ်ဦးကခက်ခဲပြဿနာလျော့နည်းမကြာခဏအမှားများအပေါ်ပြဿနာရဲ့အတိုင်းအတာကိုအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
signal ပါဝါအခြေခံပေမယ့်အလွန်အရေးကြီးသော RF စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီအသံဖမ်း signal ကိုအာဏာနှင့်ဆူညံသံတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပမာဏကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဲဒီနှစျခုတိုင်းတာနဲ့အတူကျနော်တို့ဆူညံသံအချိုး (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏) ဖို့ signal ကိုရယူပါ။ အဆိုပါ receiver ကိုကူးစက်-bits သို့မဟုတ်သင်္ကေတများပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အတှကျဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏မြင့်မားခြင်း, ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဆိုပါဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏အောက်ပိုင်း, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေကတော့နည်းနည်းအမှားအတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒီဂျစ်တယ်တီဗီထုတ်လွှင့်တိုင်းတာဘို့ကျနော်တို့မဲထက်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ရည်ညွှန်း။ နေသမျှကာလပတ်လုံးလက်ခံမယ့်မြင့်မားတဲ့မဲရှိပါတယ်အဖြစ်, ထို့နောက် QoS အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ယူဆနေသည်။ ကို receiver ဧည့်ခံသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအနိမ့်တန်ခိုးတော်နှင့်မြင့်မားသောဆူညံသံအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာ signal ကို၏မြိတ်ဧရိယာအနီးရှိအခါအဆိုပါပြဿနာမှအစပြု - "။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ချောက်ထဲ" မကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်ဤအချက်ချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာအချို့သောသင်္ကေတများမှားယွင်းစွာလက်ခံရရှိထားပါသည်။ ပြီးနောက်မဲအလုံအလောက်, တီဗီရုပ်ပုံလွှာဟာချောက်ထဲကိုဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖို့အလွန်ကနေသွားပါအသံမှလျော့နည်းစေပါသည်။
အများစုကကဗီဒီယို ဂြိုဟ်တု transmission ကိုထံမှ Point-Point-ဖို့ဒါမှမဟုတ် Point-to-မြားတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးပေးပို့ဖို့ (စသည်တို့ကိုဥပမာဒီဗွီဘီ-S က, DigiCipher II ကို, DSNG) QPSK ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး QPSK signal ကိုကဲ့သို့တူညီသောကြိမ်နှုန်းရောင်စဉ်သုံးနေစဉ်ဒီဗွီဘီ-S8 ထံမှထိုကဲ့သို့သော 2PSK အဖြစ်မကြာမီကနည်းပညာတိုးတက်မှုများကပို bandwidth ကိုခွင့်ပြုပါ။
RF နှင့် BER စမ်းသပ်ခြင်းတဘက်, TR 101 290 စာရွက်စာတမ်းထုတ်လွှင့် (စံပုဒ်မ 5) အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးတိုင်းတာတဲ့အကြံပြုထားလည်းပါဝင်သည်:
မှားယွင်းမှုများအတွက် receiver ကို signal ကိုသော့ခတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလို 1 ဦးစားပေး
ဦးစားပေး2အမှားများကိုဗွီဒီယိုနဲ့အသံအရည်အသွေးချို့ယွင်းစေခြင်းငှါဆိုလို
ဦးစားပေး3အမှားအယွင်းများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဆိုလို
အမြင်တစ် troubleshooting နှင့်အမှားအချက်အနေဖြင့်ဤစမ်းသပ်မှု၏အရေးအကြီးဆုံး Sync ကို Byte မှားယွင်းနေသည်အစဉ်မပြတ်ကောင်တာမှားယွင်းနေသည်နှင့်ပို့ဆောင်ရေးမှားယွင်းနေသည် Indicator အလံဖြစ်ကြသည်။ ဤသုံးပါးအမျိုးအစား၌တွေ့မဆိုအမှားများကိုများသောအားဖြင့်အလွန်ဆိုးတစ်ခုခုစီး၏ဂီယာဖြစ်ပျက်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်စီး၏အဆောက်အဦသို့မဟုတ် multiplexing အတွက်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ TR 101 290 စမ်းသပ် parameters တွေကိုအလျင်အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးနှင့်၎င်း၏အသံနှင့်ဗီဒီယိုဒြပ်စင်များ၏ကျန်းမာရေးတစ်ခုစိတ်ကူးရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်အခြားစမ်းသပ်မှုအချို့ကိုမကြာခဏအထင်အမြင်မှားစေဖြစ်ကြသည်။ အရေးအပါဆုံးကတော့ MPEG-2 အစီအစဉ်အစည်းအရုံးများနှင့်အစီအစဉ်မြေပုံဇယား (Pat နှင့် PMT) စမ်းသပ်မှု၏အချိန်ကိုက်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာ (ဦးစားပေး 1) Pat နှင့် PMT လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်မှန်ကြောင်း, တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာရောက်ရှိချိန်ကြားကာလလိုအပ်ချက်သည်ကောင်းပေမယ့်စားပွဲနှောင်းပိုင်းကပဲတဦးတည်းမီလီစက္ကန့ရောက်လာလျှင်, TR 101 290 display ကိုအစိမ်းရောင်ကနေအနီရောင်မှတတ်၏။ ဒါက table ထဲမှာအောင်းနေချိန်၏အပိုမီလီစက္ကန့တီဗီ, set top Box လေးဒါမှမဟုတ် TV ကကြည့်ရှုသူများကသတိပြုမိတော့မှပင်သော်လည်းအရေးပါသောအမှားဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, TR 101 290 ရလဒ်အချို့ကိုအနက်လိုအပ်နေပါသည်။ TR 101 290 အပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာမှီခိုဒုက္ခသို့သငျသညျရနိုင်သည်။ များစွာသော network operator များမှအချို့သှဖေများအတွက်ခွင့်ပြုပါရန်ရောက်ရှိချိန်ကြားကာလ၏တံခါးခုံကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတှကျအသေးစားပွဲအချို့မှုနှုန်းသို့မဟုတ်ကြားကာလမှာရောက်ရှိလာကြသည်စမ်းသပ်စဉ်ကဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းကျပ်အောင်ကြားကာလကြိမ် Keeping အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာ channel များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သေချာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် TR 101 290 မဟုတ်မမှန်တဲ့စမ်းချောင်းသို့မဟုတ် program တစ်ခုက၎င်း၏အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးရှိပါတယ်သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုပွရပျတနျ့နိုငျတယျ။ အဆိုပါတူညီသော priority2အတွက်အစီအစဉ်ကိုနာရီရည်ညွှန်း (PCR) တိုင်းတာများစွာသောအဘို့တတ်၏။ အဆိုပါကြားကာလအတွက်အနည်းငယ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးကသွေဖည်နီးပါးတိုင်းတီဗီသို့မဟုတ် set top Box လေးတစ်ခုကွာခြားချက်စေမည်မဟုတ်, သို့သော်ဤသှဖေ TR 101 290 အနီရောင်မှအစိမ်းရောင်ကနေကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး MPEG Analyzer နှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့် RF ဂီယာအချက်ပြမှုများ, စစ်ဆေးတိုင်းတာနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်လျင်မြန်စွာ signal ကိုအဆင့်နှင့်မဲအတွင်း QoS တိုင်းတာပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ RF ပြဿနာဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်။ လျင်မြန်စွာ RF ဂီယာကိစ္စရပ်များကိုဖော်ထုတ်ထုတ်လွှင့်သူတို့ပေးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်လူသိများနေသော QoS ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ရစ်ချတ် Duvall အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
တစ်ဦး MPEG Analyzer @tektronix နှင့်အတူရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အ RF စောင့်ကြည့် - မတ်လ 20, 2013
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစောင့်ကြည့်မှု tektronix 2013-03-20
ယခင်: ငါ့ကို SMPTE ပြရန်! @smpteconnect